I-Payraise Calculator I-AJAX Version inyukile! | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 1, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
utyelelo I-Payraise Calculator
Uhlala usazi xa ndinyamalala kangangeentsuku ezimbalwa- oko kuthetha ukuba ndithatha icaffeine eninzi kwaye ndicwangcisa ubuchopho bam. Enye yeeprojekthi zokuqala endakha ndazenza yayikukufaka idatabase yokusebenza kwabasebenzi kwiMicrosoft Access 2.0! Into endiyongeze kuyo (kuba isebe lethu le-HR lifuna ukuba onke amaxabiso azaliswe) yayiyinyani yokubala yokunyusa umvuzo. Ndiyicwangcise njengefom kwiziko ledatha kunye neziphumo eziprintwe kwingxelo.
Ndiyakhile le ndawo kwasekuqaleni ndisebenzisa iDreamweaver (ndingumfana obhala incwadi yesikolo… kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyidubule). Ndenze imizobo kwi-Illustrator. Ndisebenzise i-CSS kwisiphelo sangaphambili se-100%, ndaye ndanePrinta inguqulelo yeCSS (qhubeka uprinte iziphumo kwaye uza kubona). Isiphelo sangaphambili siphefumlelwe yi-37Signals… intle kwaye ilula, kodwa intle kakhulu. Ndiseneziphumo ezibonisa etafileni - kodwa oko kungenxa yokuba ndifuna abantu bakwazi ukukopa nokuncamathisela iziphumo kwi-Excel okanye nakweyiphi na ipogram. Zininzi ii-quirks ezicocekileyo malunga nesicelo. Ndiyanqwena uyayithanda!
Qiniseka ukuba uxela naziphi na iincukuthu kum! Isinyathelo esilandelayo kukudibanisa injini yokukhangela uYobhi usebenzisa Ngokwenyani kwisiphelo sasemva. Mhlawumbi kwimpelaveki ezayo!